FIFA oo ku dheggan Sacuudi Carabiya - BBC Somali
FIFA oo ku dheggan Sacuudi Carabiya
Image caption Ciyaartoyda xulka kubadda cagta ee Sacuudiga oo dabaaldegaya
FIFA waxay go'aan ka gaareysaa sidii ay u ciqaabi lahayd waddanka Sacuudiga kaddib markii ay Sacuudigu ka baxeen ciyaar loogu soo bixi lahaa koobka adduunka oo dhexmari lahayd iyaga iyo koox Falastiiniyiin ah, taas oo berrito ka dhici lahayd Daanta Galbeed.
Sacuudigu sababta ay kulankaas ku diideen waxay ku sheegeen xaalado gaar ah laakiin kooxo badan oo Carbeed ayaan dooneyn inay koox reer Falastiin ah kula ciyaaraan Daanta Galbeed sababtoo ah waxay dareemayaan in arrintaasi caadi ka dhigeyso haysashada Isra'el ee dhulka Falastiin.
Sacuudigu waxay sheegeen inay meel kale kula ciyaarayaan Falastiiniyiinta, taas oo FIFA ay aqbashay laakiin Falastiiniyiinta ayaa diiday iyagoo sheegay inay hordhac u noqonayso xaalad khatar ah oo iman doonta.
Waxay aad ugu egtahay in FIFA ay saddexda dhibcood siin doonto kooxda Falastiin iyadoo lagu guddoonsiinayo 3 - 0 gool inay ku badisay.
Hase yeeshee FIFA waxay Sacuudiga ka eryi karaan FIFA oo dhanba haddii ay sidaas doonaan.
Cidda ugu weyn ee ka faa'iidaysanaysa arrintan waa dalka Isu-tagga Immaaraadka Carabta, oo u soo bixitaanka koobka adduunka ay u sahlanaan doonto mar haddii uu Sacuudigu meesha ka baxo.